Accueil > Gazetin'ny nosy > Orin’asa Kraoma : Lasa mirehareha indray ny Tale Jeneraly Rakotomanantsoa Nirina
Orin’asa Kraoma : Lasa mirehareha indray ny Tale Jeneraly Rakotomanantsoa Nirina
Mbola mikatso hatrany ny orin’asa Kraoma hatramin’izao. Tsy noho ny resaka coronavirus sy ny fihibohana fa noho ny tsy fahaiza-mitantan’ny tale jeneraly Rakotomanantsoa Nirina. Efa hatramin’ny volana desambra no tsy nandray karama ny mpiasa. Ny harenan’ny orin’asa, na kraomita na volamena dia niharan’ny fanamparam-pahefan’Ingahy Tale Jeneraly.
Nanao fitakiana ny mpiasa ny hanoloana ny tale jeneraly fa vao mainka nirehareha Ingahy Nirina Rakotomanantsoa fa “tsy misy afaka hanaisotra azy eo amin’ny toerany na ny filohampirenena aza”. Nahoana loatra? Iza no miaro azy? Tompon’andraikitra amin’izany aloha ny Filankevi-pitondrana na “conseil d’administration”. Fanapahan-kevitry ny filankevi-pitondrana dia ampy hampihodinana ny orin’asa Kraoma ka miainga amin’ny fanalana an’i Nirina Rakotomanantsoa tsy ho tale jeneraly izany, hoy ny mpiasa. Raha ny marina dia tokony ho isan’ny orin’asam-panjakana hitondra ny anjara-birikiny goavana hiatrehan’ny fanjakana malagasy sy ny vahoaka ny fahasahiranana sy hanamaivanana ny vaikan’ny fepetran’ny fihibohana mianjady amin’ny vahoaka ny orin’asa Kraoma satria manam-bola tokony hiatrehana izany raha nihodina sy niasa, saingy noho ny fizirizirian’ny tale jeneraly Rakotomanantsoa Nirina sy noho ny tsy fahasahian’ny fitondram-panjakana foibe mbamin’ny filankevi-pitondrana mandray fepetra manaisotra azy, dia lasa mangetaheta ambony lakana ny vahoaka amin’izao fahasahiranana ateraky ny fihibohana izao. Na ny mpiasan’ny orin’asa Kraoma aza, araka ny fanambaran’izy ireo, dia tsy tokony ho sahirana na misy na tsia ny fihibohana, saingy mampalahelo fa hatramin’ny peratra mariazin’ny mpiasa sasany no voatery namidy hiatrehana ny fahasahiranana. Efa tena lasa lavitra ange izany raha ny peratra mariazy izay tena saro-bidy sy saro-pady ho an’ny ankohonana iray no tsy maintsy namidy e ! Izany fanaka na fitaovana hafa tao antokantrano izany moa dia efa ambolana ny an’ny maro no tsy maintsy namidy mba hanavotana aina fa mafy ny manjo. Mba tsapan’ny fitondram-panjakana sy ny filankevi-pitondrana ve ny halalin’izany fahasahiranan’ny mpiasan’ny Kraoma izany?
Manaitra indray ny fitondram-panjakana foibe ny mpiasan’ny Kraoma mba handray fanapahan-kevitra hentitra fa potika ny orin’asa, maty ny mpiasa ao, ary tsy mandroso ny firenena satria mikatso ny asa famokaran-karena ao amin’ny Kraoma ao Andriamena.
Efa hitanay, hoy ny mpiasan’ny Kraoma fa misy ny didim-panjakana raisin’ny fivorian’ny filankevitry ny minisitra momba ny fanendrena tompon’andraiki-panjakana ambony eto amin’ny tany sy ny firenena ka manantena ny ho fanendrena olona vaovao ho eo amin’ny toeran’ny tale jeneralin’ny Kraoma izahay.